Hain-trano tetsy Faravohitra : May tao ny volabe -
AccueilSongandinaHain-trano tetsy Faravohitra : May tao ny volabe
Hain-trano tetsy Faravohitra : May tao ny volabe
Nandrava tanàna indray ny afo. Tranombarotra miisa dimy, miaraka amin’ny trano mifanila aminy miisa efatra no indray nirehitra teny Faravohitra, omaly maraina, noho ny fitobahan’ny menaka tao amina toeram-pivarotana mofo. Ankoatra ireo entana maro isan-karazany niharan’ny famaizana dia voalaza fa nisy lelavola mitentina amina miliara ihany koa may tao.
Araka ny vaovao nampitain’ny sefo fokontany avy eny amin’ity Faravohitra ity dia trano fanendasana mofo no niantombohan’ny loza. Tamin’ny 4 ora sy sasany maraina tany no nanomboka nirehitra ny afo. Nalaky niitatra izany afo izany noho ny fitsokan’ny rivotra, izay nivadibadika be ihany. Manodidina ny sivy araka izany kosa ny trano kila avy hatrany aminy any ireo trano voakasika tamin’ity tranga nampalahelo ity. Tokony ho voafehy malaky ihany, hoy ireo nanatri-maso ity loza ity, saingy nanahirana ny mpamonjy trano may ny haterin’ny lalana nankany amin’ilay toerana niatombohan’ny afo. Izay antony izany koa no tsy nahafahan’ny maro namoaka ny entana, izay tokony mba ho voavonjy. Izany rehetra izany no niseho, hoy ireo nahita tany an-toerana, dia noho ny tsy fitandremana avy amin’ireo trano hazo mametraka afo ao amin’ny tranony. Tsy nisy olona ihany koa mantsy ity trano izay fantatra fa niavian’ ny afo. Tsy fantatra mazava araka izany izay tena nitranga fa mbola tombatombana ny filazana fa ny menaka fanendasana no nitobaka, ka nianjera tamin’ny entana tao an-trano, tamin’ny fotoana tsy nahateo ireo mpiandraikitra ity tsenakely ity.
Na izany aza, dia fantatra fa toa efa voafehy tanteraka ilay afo noho ny ezaka nifandrombonan’ireo mponina sy ny sampana mpamono afo. Mbola tsy voalaza aloha hatreto ny tena hadirin’ny fahavoazana nentin’ity loza niseho omaly ity. Ny siosion-dresaka mandeha no milaza fa misy vola tsy toko tsy forohana tsy voavonjin’ireo tompon-trano, ka kila forehitra tao avokoa. Vola nokasaina haloa any amin’ny banky ireo vola may ireo, saingy noho ny fiarovana ny aina dia tsy naharay inona intsony izy ireo. Mety ho maromaro araka izany indray izany no tsy hanan-kialofana vokatr’ity loza ity, tsy nisy ny aina nafoy.